Ndeupi musiyano weSolar PV Cable PV1-F uye H1Z2Z2-K standard?
1000V Imwe Core Solar Cable
1000V Double Core Solar Cable
1500V Imwe Core Solar Cable
1500V Double Core Solar Cable
Pasi Ground Cable
BVR AC Bhatiri Cable
Solar Cable Tie
Solar PV Chinongedzo
MC4 Chidimbu 1500V 50A
MC4 Chidimbu 10mm2
MC4 fiyuzi Connector
MC4 M12 Panel Chibatanidza
MC4 Diode Chinobatanidza
MC4 Kuiswa chisimbiso Cap
MC4 Bazi Rinobatanidza
2 kusvika 1 T Bazi Connector
3 kusvika 1 T Bazi Connector
4 kusvika 1 T Bazi Connector
5 kusvika 1 T Bazi Connector
6 kusvika 1 T Bazi Connector
PV Cable Sunga
MC4 Yekuwedzera Cable
2 kusvika 1 Y Bazi Connector
3 kusvika 1 Y Bazi Connector
4 kusvika 1 Y Bazi Connector
Inodzora Pasi Cable
Anderson Simba Cable
SAE Bhatiri Cable
PV Fuse Circuit Remake
DC Fuse Mubati
DC Dunhu Remubati MCB
DC Kuwedzera Kusunga SPD
DC Isolator Chinja
AC Circuit Remake MCB
AC Kuwedzera Kusunga SPD
Distribution Yakakomberedzwa Bhokisi
Solar Charge Mutungamiriri
PWM Solar Mutungamiriri
MPPT Solar Mutungamiriri
400W Micro Inverter
600W Micro Inverter
1200W Micro Inverter
Anderson Simba Chinongedzo
1P Anderson Chinongedzo
2P Anderson Chinongedzo
3P Anderson Chinongedzo
PV Turu Zvishongedzo
Chishandiso Kits Bhegi
PV Tab Waya Bhazi Bar
KN95 Chiso Chemufema
Disposable Chiso Mask
Yedu photovoltaic (PV) tambo dzinoitirwa kusanganisa magetsi emagetsi mukati meinowedzerwazve simba mafotovoltaic masystem senge ezuva remagetsi arrays mumapuraneti ezuva rezuva. Aya tambo dzemagetsi ezuva anokodzera kuiswa kwakamisikidzwa, zvese zvemukati nekunze, uye mukati mekombi kana masystem, asi kwete zvekushandisa zvekuviga zvakananga.
Yakagadzirwa ichipesana neazvino European Standard EN 50618 uye neyakaenderana zita H1Z2Z2-K, idzi Solar DC Cable dzakatemwa tambo dzekushandisa mu Photovoltaic (PV) masisitimu, uye kunyanya iwo ekuisirwa padivi reDirect Current (DC) ine zita DC voltage inosvika 1.5kV pakati pevafambisi pamwe nepakati pekondakita nepasi, uye isingapfuure 1800V. EN 50618 inoda tambo kuti dzive dzakaderera hutsi zero halogen uye dzive dzinochinjika tini-yakavharwa maconductor macondors ane imwechete musimboti uye muchinjika-yakabatana kuputira uye sheath. Tambo dzinofanirwa kuyedzwa pamhepo ye11kV AC 50Hz uye iine tembiricha yekushanda iri -40oC kusvika + 90oC. H1Z2Z2-K inotsiva iyo yapfuura TÜV yakatenderwa PV1-F tambo.
Iwo makomponi anoshandiswa mune ino yekuvhara waya tambo uye kunze kweheath halogen yemuchinjikwa-yakabatana, ndosaka kutaurwa kune idzi tambo se "muchinjika-wakabatana wezuva tambo dzemagetsi". Iyo EN50618 standard sheathing ine mukobvu wakakora kupfuura iyo PV1-F tambo vhezheni.
Sezvakaita TÜV PV1-F tambo, iyo EN50618 tambo inobatsira kubva kune yakapetwa-yekuwedzera chipiro chakawedzera chengetedzo. Iyo Yakapfungaira Utsi Zero Halogen (LSZH) kuputira uye sheathing inoita kuti ive yakakodzera kushandiswa munzvimbo dzinopfungaira utsi hunogona kuunza njodzi kuhupenyu hwevanhu kana paitika moto.
SOLAR PANEL Cable NESIMBA
Kuti uwane zvizere zvehunyanzvi maratidziro ndapota tarisa kune iro dhatabheti kana kutaura kune yedu timu yehunyanzvi kuti uwane mamwe mazano. Solar waya zvishongedzo zviripo.
Idzi tambo dzePV dzinodzivirira ozone zvinoenderana BS EN 50396, UV inopikisa zvinoenderana HD605 / A1, uye kuyedzwa kuti igare mukuenderana EN 60216. Kwenguva pfupi, iyo TÜV yakabvumidza PV1-F tambo ye photovoltaic ichave ichiwanikwa kubva kudura .
Rakafara tambo tambo dzekugadziriswazve kumisikidza inowanikwawo inosanganisira kumahombekombe uye kumahombekombe emhepo turbines, hydroelectric uye biomass kugadzirwa zviripo.
Post nguva: Nov-29-2020